Midowga Afrika oo baaq kasoo saaray rabshadaha Ethiopia
ADDIS ABABA, Ethiopia - Guddoomiyaha Midowga Afrika, Moussa Faki Mahamat ayaa ku baaqay xasilooni kadib markii dalka Ethiopia ay ka dhaceen rabshado ka dhashay dilka heesaa caan ahaa.
Ku dhowaad 90 ruux ayaa ku dhintay rabshadaha Itoobiya, waxaana laga cabsi qabaa in dhimashadda ay intaas ka badato maadaama xaaladda ay wali tahay mid kacsan aynsa muuqa ifafaalo fiican
Afrika 03.07.2020. 19:45
AU: Ma farogelin karno kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya
Soomaliya 06.09.2019. 14:36
Itoobiya oo fashilisay weerar, mas'uuliyiina u xirtay musuq
Afrika 13.04.2019. 05:50
​Soomaaliya: Diyaarad lagu soo riday Garoonka Xudur
Soomaliya 07.10.2017. 18:43